Bukayo Saka, Smith Rowe Iyo Xiddigaha Kale Ee Arsenal Ee Dhaawaca Ku Seegaya Ciyaarta Liverpool Ee Sabtida - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBukayo Saka, Smith Rowe Iyo Xiddigaha Kale Ee Arsenal Ee Dhaawaca Ku Seegaya Ciyaarta Liverpool Ee Sabtida
Bukayo Saka, Smith Rowe Iyo Xiddigaha Kale Ee Arsenal Ee Dhaawaca Ku Seegaya Ciyaarta Liverpool Ee Sabtida
Mikel Arteta ayaa shaaciyey in xiddigaha da’da yar ee kooxdiisa ee Bukayo Saka iyo Emile Smith Rowe uu shaki ku jiro taam ahaanshahooda ciyaarta Sabtida ee Liverpool, taas oo ay u badan tahay in ay ka maqnaadaan.
Bukayo Saka ayaa laga saaray liiska ciyaartoyda xulka qaranka England ee horraantii bishan uu tababare Gareth Southgate xushay markaas oo uu dhaawac kasoo gaadhay muruqa, waxaana usbuucyadii ugu dambeeyey lagu daawaynayay xarunta caafimaadka ee Arsenal.
Smith Rowe ayaa isaguna ka maqnaa kulankii xulka qaranka England ee da’doodu ka hoosayso 21 jirrada lagaga reebay tartanka Euro 21 oo shalay ay shandaddooda kasoo xidh-xidheen, waxaanu dhaawacu soo gaadhay ciyaartii Croatia.
Tababare Mikel Arteta oo warbaahinta la hadlay subaxnimadii Khamiista ayaa shaaciyey in Bukayo Saka aanu wali kusoo laabanin tababarka xilli maalin kali ahi ka hadhsan tahay ciyaarta Liverpool.
Mar la weydiiyey xaaladda taam ahaansho ee Saka, waxa uu Mikel Arteta ku jawaabay: “Wali kooxda lama tababaranin, waxaanu u shaqaynayaa si shaqsi ah. Waxa aanu kasoo saarnay xulka qaranka England nasiib-darro, balse hadda wuxuu dareemayaa fiicnaan inkasta oo aanu wali tababarka la qaadan kooxda.”
Mikel Arteta waxa kale oo uu ka hadlay dhaawaca Smith Rowe oo uu ka muujiyey niyad-samaan, waxaanu xaqiijiyey in uu tababarka kusoo laaban doono maalinta Jimcaha, isagoo yidhi: “Dhaawac ayaa kasoo gaadhay muruqa bowdada, waana sababtii loo go’aamiyey in xulka qaranka England uu uga maqnaado.
“Waynu eegi doonaa maanta sida uu maanta yahay, waxaanan la hadli doonaa dhakhaatiirta, anagoo eegi doona haddii uu tababarka iman karo berri.”
Bukayo Saka oo si joogto ah ugu soo bilaabanayay Arsenal xilli ciyaareedkan, isal markaana lix gool dhaliyey toddoba kalena caawiye ka noqday ayay kooxdiisu si weyn u tebi doontaa ciyaarta Liverpool.
Smith Rowe ayaa isaguna wax badan kusoo kordhiyey khadka dhexe intii ka dambaysay Ciiddii Masiixiga ee dhamaadka bishii December.